Nhau - Ungaronga sei uye uvake chigadzirwa chekugadzira nyama nesainzi uye zvine musoro?
Maitiro ekuronga nekuvaka nyama inogadzira nyama sainzi uye zvine musoro?
Maitiro ekuronga nekuvaka nyama yekugadzirisa nyama nesainzi uye zvine musoro zvakakosha kumakambani anogadzira nyama, kunyanya iwo makambani anongobata mukugadzirisa nyama anowanzo sangana nemamwe matambudziko anonetsa. Kuronga zvine musoro kunowana zvakapetwa kaviri nehafu yekuedza mukuita kwakatsetseka kwekuvaka. Zvikasadaro, hakusi kungotambisa kwemaawa-emunhu uye kugadzirisa zvakare kuwedzera mutengo wekuvaka, vamwe vachatotadza kushanda zvakajairika. Mukupindura kumatambudziko ataurwa pamusoro apa, apo nyama inogadzira nyama iri kuvakwa, pfupiso yebasa uye nezvimwe zvine chekuita ndeyekutarisa kwako.
1. Iyo hurongwa hwekugadzirisa chikero uye chigadzirwa mhando
Chekutanga pane zvese, zvakafanira kujekesa chiyero chekugadzirisa uye mhando yezvigadzirwa zvakagadziriswa, senge: nyama nyowani, nyama yakatemwa, kugadzirira nyama uye yakadzika-yakagadziriswa zvigadzirwa zve nyama, nezvimwe, maererano nehukuru hwechiyero chekugadzira uye kugadzirisa mhando, zvinodikanwa kuti usangane nezvinodiwa zvazvino zvekugadzirisa, Uyezve funga nezvekuwedzera kwekutevera kunogadziriswa.
2. Iko kunogadzirwa fekitori
Iyo nzvimbo yekugadzirisa fekitori yakaferefetwa geological inofanirwa kuve nzvimbo ine nyore kutakura, magetsi magetsi, masosi emvura akakwana, pasina magasi anokuvadza, guruva, uye zvimwe zvekusvibisa, uye zviri nyore kuburitsa tsvina. Iyo yekuuraya baitiao kugadzira fekitori iri kure nenzvimbo dzine vanhu vazhinji; iyo nyama inogadzira yakadzika yekugadzirisa chirimwa (semusangano) inogona kuvakwa munzvimbo yakakodzera mutaundi nemvumo yedunhu rekuronga kwemaguta nedhipatimendi rehutano.
3. Dhizaini yeganda rekugadzirisa
Dhizaini uye marongero emusangano anofanira kuenderana neyakagadzirwa michina yekugadzira uye maitiro ekugadzirisa, uye zvinoenderana nezvinodiwa pakuvaka chengetedzo, hutsanana uye kuchengetedza moto. Yakashongedzerwa nezvivakwa zvakakwana, iyo huru yekugadzirisa musangano uye mashopu ebetsero akaunganidzwa zvine mutsindo, uye maitiro mune ega ega ekugadzirisa musangano ari mushe uye ane yakanaka yekuzviparadzanisa uye mamiriro emwenje. Mikova nemahwindo, masvingo ekuparadzanisa, pasi pevhu, dhizaini, siringi, kushongedza, nezvimwewo mumusangano zvinofanirwa kunge zvichienderana nekuchengetedzwa kwechikafu Hutano hweyakavakirwa, kugoverwa kwesimba, mwenje, kupihwa kwemvura uye kudhiraina inofanira kurongwa munzvimbo. Nzvimbo yekudyara nemigwagwa mikuru inofanirwa kunge iine greenery, uye migwagwa mikuru inofanirwa kuwedzerwa nematombo akaomarara akakodzera traffic yemotokari, uye migwagwa inoenda kunzvimbo dzakasiyana inofanirwa kupihwa. Nzvimbo yemiti inofanirwa kunge iine mvura yakanaka uye yekudyira.
4. Sarudzo yemidziyo
Kugadzira michina inoita basa rakakosha mukugona uye mhando yezvigadzirwa zvakagadziriswa. Imwe neimwe yekugadzirisa bhizinesi inobata kukosha kukuru kwenzira yekusarudza michina inokodzera kugadzirisa zvinodiwa uye iri musoro unorwadza. Chekutanga pane zvese, zvinodikanwa kuti unyatso tsvaga mhando yemidziyo inodiwa. Imwe neimwe yekugadzirisa michina inofanirwa kuve yakagadzirirwa uye kugadzirwa mukuomerera zvichienderana nemaitiro akasiyana ezvigadzirwa. Iyo midziyo ine yakasimba hunyanzvi zvinodiwa maererano nebasa, hutsanana, kuchengetedzeka, uye mukurumari. Iyo michina haisi chete yakazara uye inonzwisisika muchimiro, asi zvakare yakanaka uye yakanaka kunze. , Mukugadziriswa kwemidziyo yekugadzirisa yakakwana, michina yemagetsi inowirirana zvakanyanya neyakayerera kuyerera uye mamwe maratidziro akafanana. Edza kusarudza michina kubva kune mumwe mugadziri kuti uwane hunyanzvi uye zvine musoro michina inoenderana, iri nyore mushure mekutengesa sevhisi uye inowirirana neruzivo rutsigiro.
5. Nzvimbo dzakabatana
Iyo yekugadzirisa fekitori inoumbwa neiyo huru yekugadzira musangano uye zvimwe zvinoenderana zvizere zvivakwa, izvo zvinofanirwa kuverengerwa mune yekudyara kuronga. Zvivakwa zvakakosha uye zvishandiso zvinofanirwa kuenda nenzira dzakakodzera dzemvumo. 1. Magetsi: Simba remagetsi ataurwa rinofanira kunge rakakura kudarika huwandu hwesimba remagetsi rakaverengwa nemuchina wekugadzirisa, uye rinofanirwa kuve neakamuri-yekumanikidza gasi yekudzora kamuri nemidziyo yekudzora. Zvishandiso zvakakosha kana nzvimbo dzakasarudzika dzekugadzira dzinofanirwa kuve dzakagadzirwa nemagetsi ekukurumidza magetsi. 2. Mvura: yakakwana Hunhu hwemvura yematsime emvura kana michina yemvura inofanirwa kusangana nehutsanana. Kana zvivakwa zvekuchengetera mvura zvichidikanwa, matanho anodzivirira kusvibiswa anofanirwa kutorwa kunatsa kuchenesa nekuisa hutachiona nguva dzose; 3. Kutonhorera kutonhora: Zvinoenderana neyakagadzirwa kugadzirwa vhoriyamu uye chigadzirwa nguva yekutendeuka, kugona kwekukurumidza-kutonhora chengetedzo, kutonhora kutonhorera, uye nyowani-yekuchengetedza-kuchengetedza inofanirwa kupihwa sezvakakodzera. Iyo nzvimbo inofanirwa kuve nyore kutakurwa kwezvigadzirwa mukati nekunze; 4. Kunopisa: Iko kunopisa kunonyanya kusanganisira mabhaira, pombi yemhepo, uye gasi rechisikigo. Kana bhaira steam ichishandiswa, imba yekubikira inofanira kuva nenzvimbo yakakwana yakachengeteka kubva kumusangano, nzvimbo yekugara kana nzvimbo ine zviitiko zvevashandi, uye iine nzvimbo dzekudzivirira; 5. Zvimwewo: magaraji, matura, mahofisi, kuongorora kwehunhu, nezvimwe zvinofanirwa kuwanikwa maererano nematanho anoshandiswa Anowirirana anoenderana.
Iyo fekitori inoda vakarovedzwa uye vanokwanisa vashandi vehutano, uye inofanirwawo kuve yakagadzirirwa nevashandi venguva yakazara-manejimendi, avo vasingakwanise kungogadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvine hunyanzvi, asi zvakare vanokwanisa kushanda nekuchengetedza michina nemidziyo zvinehunyanzvi.
Chikafu chenyama indasitiri yakakosha mukusimudzira hupfumi. Anoshanda anoshanda nyama manejimendi manejimendi akagadzwa mune sisitimu yesainzi uye inonzwisisika yekugadzirisa nyama yekudyara uye nyanzvi yekugadzira nyama zvigadzirwa Isu tinofanirwa kupa zvakanaka zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kumusika. , Hutano nyama chikafu, asiwo kugadzira mhando yepamusoro, ine nyama zvigadzirwa zvine mutsigo uye zvinogara, kunyanya makambani achangopinda mukugadziriswa kwechikafu chenyama anoda kutariswa kwakawanda.